Samachar Batika || News from Nepal » यस्ता गुण भएको नारीहरुको घर स्वर्ग समान हुन्छ
यस्ता गुण भएको नारीहरुको घर स्वर्ग समान हुन्छ
१ – जुन नारी मीठो बचन बोछिन्, जुन नारीको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण मायालु बोली÷ब्यवहार दर्शाउँछिन् भने त्यस्ता नारी भएको घर स्वर्गसमान हुन्छ ।
२ – जुन नारी हरेक दिन स्नान गरेर सफा एवं स्वच्छ व’स्त्र लगाएर घरमा प्रवेश गर्छिन् भने त्यस्तो नारी भएको घर एकदमै आनन्ददायी हुन्छ
३ – अर्काको दुखमा सहयोग गर्ने नारीले पनि आफ्नो घर उज्यालो बनाउन सक्छन् ।
३ – कुनैपनि घरमा आस्तिक, सेवा भाव राख्ने, क्षमतावना, दयावान र कर्तव्य पालना गर्ने नारी छिन् भने मान्नुस् त्यो घर स्वर्ग समान हुन्छ ।
४ – जो स्त्री तनले भन्दा मनले सुन्दर छिन् त्यस्तो घर पनि सुन्दर बगैंचा जस्तै हुन्छ ।
५ – जो नारीले घरमा आएका पाहुनालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छीन् भने त्यो घरमा पनि देवताका बास हुन्छ ।
६ – पतिव्रत धर्मको पालना गर्ने नारी भएको घरमा पनि कहिल्यै झगडा पर्दैन ।
– ब्रह्माण्डको सृष्टि र अझ त्यसमा पनि प्राणी जगत्लाई हेर्ने हो भने एउटा अचम्मलाग्दो फरकपन पाइन्छ । मानिसबाहेक सृष्टिका सबै प्राणीका स्त्री जातिभन्दा भाले जाति सुन्दर देखिन्छन् । मानिस मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसका भाले जातिभन्दा स्त्री जाति सुन्दर हुन्छन् । ती सुन्दर स्त्रीलाई प्राप्त गर्न हरेक पुरुष लालायित हुन्छन्, तर के सबै स्त्री सुन्दर नै हुन्छन् त ? सबै स्त्री सुन्दर हुँदैनन् । पूर्वीय दर्शनमा स्त्रीको सुन्दरताका विषयमा अनेकन प्रसंग उल्लेख छन् । पूर्वीय दर्शनमा महिलाको सुन्दरता मात्र होइन, पुरुषको सुन्दरताका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पौराणिक ग्रन्थहरूमा सुन्दर हुनका लागि महिला तथा पुरुष दुवैमा केही समान गुण हुनैपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ, जुन पछि गएर पश्चिमा संस्कृतिले पनि घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेको छ ।
के हो त सुन्दरता ? पूर्वीय दर्शनमा स्वस्थ शरीरलाई महिला तथा पुरुषको सुन्दरताको पहिलो मापदण्डमा राखिएको छ । सुन्दरतामा स्वास्थ्यको ठूलो महत्व छ । यदि कुनै व्यक्तिको अनुहारमा दाग छ भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन । मेडिकल साइन्सले पनि कुनै ठाउँमा दाग आउनुलाई अस्वस्थताको संकेत मान्छ । पोतो–चायाँ आउनु भनेको अस्वस्थताको प्रमाण तथा सुन्दरताको अंक घट्नु हो । पूर्वीय दर्शनमा लामो केशलाई सुन्दर भनिएको छ । केश फुल्नु, हाँगा आउनु पनि अस्वस्थताको संकेत हो । यदि मानिस स्वस्थ छ भने सादा पानीले नुहाए पनि राम्रो देखिन्छ । स्वस्थता गुमाएपछि मानिस नराम्रो देखिन्छ अनि कस्मेटिक (प्रसाधन) प्रयोग गर्न थाल्छ मानिसले आफ्नो सुन्दरता टिकाउने हो भने प्रकृतिसँग मिल्ने गरी आफूलाई सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ । यस्तो सुन्दरता टिकाउ पनि हुन्छ ।
सुन्दरताको दोस्रो सर्त भनेको प्रत्येक अंगको समानुपातिक विकास पनि हो । स्वस्थतासँगै उनीहरूको शारीरिक अंग–प्रत्यंगहरू पनि समानुपातिक हुनुपर्छ । जस्तै शारीरिक बनोट, छाला, केश आदि सबै स्वस्थ्य हुनुपर्छ । तीसँगै अं’ग–प्र’त्यंगको विकास पनि समानुपातिक नै हुनुपर्छ । जस्तो— हाइटअनुसार आँखा, कान तथा अनुहारको बनोट हुनुपर्छ भने छाती पनि समानुपातिक रूपमा मिलेको हुनुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई राम्रो भन्ने जमात विश्वमा ठूलै छ, तर शरीरको समानुपातिक वितरणका हिसाबले उनलाई सुन्दर भन्न सकिँदैन । उनको शरीर छोटो छ तर हात–खुट्टा अत्यधिक लामा छन् । यो सुन्दरता होइन, भलै अमिताभको व्यक्तित्वले त्यसलाई जितेको छ । त्यही भारतीय चलचित्र उद्योगका ५ फिट २ इन्चका अमिरखानको शारीरिक बनोट भने समानुपातिक छ । त्यही कारणले उनको चकलेटी फेस राम्रो देखिन्छ । आमिरको हाइटअनुसार अनुहार, आँखा, खुट्टा, कान, छाती सबै समानुपातिक रूपमा चिटिक्क मिलेको छ । पुरुष मात्र होइन, महिलाको शरीर पनि त्यसरी नै समानुपातिक रूपमा मिलेको हुनुपर्छ, स्वस्थता त अनिवार्य नै भैहाल्यो । उचाइअनुसारका हरेक अंगको बनोट सुहाउँदो छ कि छैन, हेर्नुपर्छ ।
नारी सुन्दरता-नारी सुन्दरताका दृष्टिले पूर्वीय दर्शन पश्चिममा विकसित आधुनिक विज्ञानकै नजिक छ । पूर्वीय मान्यतामा चन्द्रमाजस्तो मुहार भएकी, गोरो शरीर, हरिणको जस्तो सेतो आँखा हुने महिलालाई सुन्दर महिला भनिएको छ । यस्ता महिलालाई अप्सरा वा प्रकृतिसँग पनि तुलना गरिन्छ । अनेकन रोमान्टिक गीत–संगीतमा सुन्दर नारीका अं’ग–प्रत्यंगलाई लिएर अनेकन शब्द तथा ध्वनि रचना गरिएका छन् । पूर्वीय दर्शनका अन्य विभिन्न शास्त्रमा पनि स्त्री तथा पुरुष सौन्दर्यका विषयमा वर्णन गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७६, मंगलवार ०७:५५